PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - Babhekene ngeziqu zamehlo ODJ bodumo
Babhekene ngeziqu zamehlo ODJ bodumo
Basonga nokuyisana enkantolo
Ilanga langeSonto - 2017-11-12 - Front Page - SANDILE MAKHOBA
ABASABHEKANI ODJ bodumo basethekwini. Izimpukane eziluhlaza zithi isimo asisihle phakathi kwalab’ ODJ, okungudj Tira (Mthokozi Khathi) ongumnikazi we-afrotainment, nodj Fisherman (Sifiso Mjoli) obengumdidiyeli ngaphansi kwe-afrotainment.
UDJ Fisherman wakwandengezi, entshonalanga yetheku kubikwa ukuthi akasasondeli nokusondela emahhovisi e-afrotainment. Imithombo YELANGA Lange
Sonto esondelene naye lo DJ ipotshozele leli phephandaba ukuthi isimo sibi impela phakathi kwalab’ osaziwayo.
Lo mthombo uphinde wadalula ukuthi UDJ Fisherman kuyimanje uxhumana nabameli bakhe, bahlela ukubopha le nkampani kadj Tira.
Kuthiwa usola i-afrotainment ngokungamkhokheli imali yama- royalties engoma eshise izikhotha ihappy Song.
“Ufisherman ufuna utira amkhokhele izigidi zamarandi. Ukhala ngokuthi akatholanga lutho emalini yakwa-supersport njengoba le ngoma ibisebenziswa yibona nje,” kuqhuba umthombo.
Ethintwa yileli phephandaba UDJ Tira uzwakale sengathi uphelelwa wumoya uma ebuzwa ngalolu daba. Uthe UDJ Fisherman akahlangani nakancane nale ngoma, ngakho-ke akanalo igunya lokufuna amaroyalties ayo.
“Akenzanga lutho ufish kule ngoma. Abantu abafaka isandla ngudj Tira, yibig NUZ, yase ididiyelwa yi-infinite Boys - ngakho-ke ayikho into ayikweletwayo,” kuchaza UDJ Tira.
Ebuzwa YILANGA Lange-
Sonto ukuthi basasebenza ndawonye yini uthe kade wamgcina yena.
“Angisamazi washonaphi, asisakhulumi nokukhuluma kodwa uma efika eze emsebenzini mina ngeke ngimxoshe. Ngeke ngimuvimbe umuntu uma kukhona afuna ukukwenza.
Badala manje, sebengenza noma yini, angihlangani,” kulanda UDJ Tira.
Ngakolunye uhlangothi UDJ Fisherman ethintwa
mayelana nalolu daba ungena ezintangeni. Akaluvumanga futhi akaluphikanga kodwa uthe ucela intatheli imthumelele imibuzo nge-email, kuzophendula abamkhulumelayo.
“Umsebenzi wami ukuciphaza, angikwazi ukukhuluma kodwa thumela imibuzo, ithimba engisebenza nalo lizokuphendula ngokuphuthuma,” kusho yena.
Ngemumva kwesikhashana intatheli ithumele imibuzo, iphinde yamshayela ucingo UDJ Fisherman, waqinisekisa ukuthi uyitholile imibuzo, wathi uzoyedlulisela kwabazophendula.
Ngemuva kwesikhathi intatheli iphinde yamthinta, wagcizelela ukuthi umsebenzi wakhe ukuciphaza.
“Ngibanikile imibuzo, kusho ukuthi basayicubungula. Mina ngeke ngikwazi ukukhuluma ngoba akulona ithalente lami,” kuchaza ufisherman.
Ngemuva kwalokho ucingo lwakhe ubengasaluphenduli uma eshayelwa yintatheli, belukhala luze luzithulele.
Kuzokhumbuleka ukuthi UDJ Fisherman ungomunye wamaciko afike e-afro isaqala. Phambilini ubehambisana neqembu ibig NUZ elidlalela njengo-dj. Ngonyaka wezi-2010 lo DJ unikwe ithuba lokuzimela kodwa engaphansi kwayo i-afro. Ukhiphe i-album yakhe yokuqala esihloko sithi “Fish Tank” okuyiyona ebinale ngoma okuthiwa isisuse ukungezwani, ihappy Song.
Uke wasebenza nabaculi abaningi abehlukene okubalwa kubona ibig NUZ, unaaq Music, ubucie nabanye.
Omunye umthombo uthi into ehluphe UDJ Fisherman kakhulu yisikhwele ngoba bese kukhona abanye abadidiyeli abancane e-afro.
“Ufish ushaywe isikhwele ngoba ebona ukuthi ziyashisa lezi ntwana ezincane, manje utira ubengasamnaki kakhulu,” kusho umthombo.
Kushaye isikhathi sokushicilela impendulo kudj Fisherman ingathunyelwe. makhoba@ilanganews.co.za
BASONGA UKUFAKANA ENKANTOLO
SISHUBILE isimo phakathi kukadj Tira ongumphathi wenkampani yomculo i-afrotainment, nodj Fisherman, ongumdidiyeli kuyo le nkampani. ILANGA Langesonto lipotshozelwe yimithombo yalo ethembekile ukuthi ingxabano isuswe wukungenami kukadj Fisherman ngenxa yezimali.
ISITHOMBE NGABE: AFROTAINMENT
UDJ Tira nofisherman ngezikhathi zabo ezimnandi besendawonye.